Mukhtaar Roobow Oo Gaadhay Magaalada Xudur Oo Uu Joogo Wasiirka Gaashaandhiga DFS – Heemaal News Network
Mukhtaar Roobow Cali loona yaqaan Abuu Mansuur, ayaa lagu soo warramayaa inuu gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasi oo ay ku sugan yihiin wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ah iyo taliye kuxigeenka NISA.
Gudoomiyaha magaalada Xudur, Maxamed Macallin, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Mukhtaar Roobow iyo ciidan la socda ay gaareen magaaladaasi.
Dagaalamayaal daacad u ah Roobow iyo xoogga Al-Shabaab ayaa dhowr goor ku dagaallamay deegaanka Abal, halkaasi oo bilihii dambe uu ku sugnaa mas’uulkan ka tirsanaa ururkaasi.
Bishii juun ayaa dowladda Maraykanka waxay Mukhtaar Roobow ka saartay liiska madaxda Al-shabaab ee ay lacagta dul dhigtay.
Mukhtaar Roobow ayaa mar ahaa hogaamiyaha labaad ee ugu sareeya ururkaasi, waxaana sidoo kale uu noqday afhayeenka Al-Shabaab.
Several thousand fans on Friday watched the first night-time football match to be played in Mogadishu since chaos descended on the Somali capital nearly three decades ago, raucously backing their respective teams in what the […]
Iyadoo hadda khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha Hay’adaha Garsoorka dalka iyo Golaha Shacabka Somaliya, kadib markii Baarlamaanka ay diideen go’aankii maxkamadda sare ee dib ugu laabashada kuraas sided xubnood doorashadooda, ayaa Xubnaha Aqalka […]